Daabacaad: Baahida Daabac iyo Dhameystirka Sarkaalka | Martech Zone
Mid ka mid ah ereyada khaldan ee daadinta dhibcaha ayaa ah inaad lumineyso faa'iido maadaama aad bixineyso bixiyeyaasha kale si ay u daabacaan oo u gutaan badeecadaada. Taasi runti maahan kiiska gebi ahaanba. Muranku waa kharashka weyn ee bilowga ah si aad u dhisto xarumo kuu gaar ah iyo xarumo fulineed si loo waafajiyo koritaanka.
Qubanayaashu waxay kasban karaan in kabadan 50% faa'iido ka badan kuwa haysta keydkooda keydka ah. Intaa waxaa sii dheer, shirkadaha furitaanka fulintooda illaa iibinta iyagoo u maraya khibrada daadinta ayaa ka badan 18% faa'iido badan.
Daabacaadda daabacaadda ah ee dalabka iyo dhammaystirka daabacaadda waxay leedahay qaab-fulin heer sare ah oo dhammaystiran oo calaamadeysan iyo noocyo kala duwan oo dhar iyo alaab guri ah oo si buuxda loogu qaabayn karo astaantaada. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka dhigto badeecooyin kala duwan udub dhexaad u ah ganacsigaaga guud you ama aad kaliya rabto inaad soo bandhigto alaab kuu gaar ah oo iib ah, Daabacaaddu waa hab fiican oo si dhakhso leh kor loogu qaado.
Halkaas ha ku joojin, in kastoo. In kasta oo Daabacaadda ay tahay adeeg-bixiyahaaga daabacaadda-dalbashada ah iyo adeegga fulintiisa… weli waxaad u baahan tahay barxad ganacsi iyo weliba is-gaarsiin suuqgeyn ah oo loogu talagalay in lagu maareeyo gaariga wax iibsiga ah ee laga tagay iyo isgaarsiinta kale.
Sidee Daabacaadu u shaqaysaa
Amaradaada si toos ah ayaa loo marinayaa iyada oo loo marayo barnaamijka Daabacaadda boggaaga e-commerce… markaa uma baahnid inaad wax qabato laakiin ka shaqayso hal-abuurkaaga iyo suuqgeynta ganacsigaaga.
Mid ka mid ah xoogagga daabacaadda ayaa ah mashiinkeeda muusikada adag iyo noocyo kala duwan oo sawirro wax soo saar ah oo lagu dari karo bartaada ganacsiga. Kaliya gali hal-abuurkaaga, xulo nooca sheyga iyo qeexitaannada, ka dibna soo saar sawirka aad jeceshahay inaad ka muujiso bartaada. Looma baahna sawir-qaadis ama moodello… dhammaantood waa la wada dhisay!
Ku Jees Jeeso Badeecad Hadda
Bakhaar daabacan iyo dhammaystir
Daabacaaddu waxay daryeeshaa daabacaadda, gudbinta, iyo xitaa aqbalida soo celinta alaabtaada. Haddii sababta soo noqoshada ay ahayd khalad daabacaad - xitaa waxay daboolayaan kharashaadka.
Daabacaadda daabacaaddu waxay leedahay 8 xarumood oo adduunka ah, oo leh saddex meelood oo ku yaal Maraykanka: laba Charlotte, NC, mid ku yaal Valencia, CA, iyo goobtooda kale ee cusub ee Dallas, TX.
Wax dheeri ah aqriso Saxiix Saxeex
Ku Iibinta Alaabadaada Dukaan-iibsi
Taladayda ku saabsan madal ecommerce fudud oo la adeegsado ayaa ah Soo iibso. Waa wax dareen leh, waxay leedahay matoor shey buuxa leh, waxayna leedahay xoogaa is-dhexgal la yaab leh oo leh tan kale oo dhufto ah oo lagu maareeyo, lagu suuq geeyo, laguna kobciyo ganacsigaaga ganacsiga.
Tallaabooyinku waa sahlan yihiin:
Kudar App Daabacaad ah si aad wax u iibsato
Ku dar alaabada aad jeclaan lahayd inaad ku darto dukaankaaga.
Shakhsi ku sharax sharaxaada alaabtaada.
Awood u yeelo sicirkaaga nool… haddii aad leedahay rar bilaash ah, hubi inaad ku daboosho intaas qiimahaaga nool.
Fur Bakhaarkaaga Dukaan
Tayaynta iyo Isku-darka Qalabaynta Suuq-geynta Klaviyo
Mar alla markii aad heysato goob e-commerce ah oo shaqeyneysa, kuma filna. Waxaan si aad ah ugu saxiixi lahaa Klaviyo. Klaviyo waxay wax ka qaban doontaa wax kasta oo ka soo baxa saxeexyada joornaalada, dalabyada soo baxa (oo ujeedadu tahay ka bixitaanka), xusuusiyeyaasha gawaarida dukaamaysiga ee laga tagay… iyo wax kasta oo u dhexeeya
Waa barxad la yaab leh oo leh qalab otomaatig ah oo diyaar u ah inay si toos ah uga baxdo sanduuqa person kaliya iyaga ku gaar yeelo astaantaada, hagaaji farriinta, oo iyaga noolow.
Suuqa leh Klaviyo
Shaacinta: Waxaan ka faa'iideysanayaa xiriiriyeyaashayda ku xiran maqaalkan.
Tags: daadiyaa maraakiibtajoojintafulinta ecommercesoo celinta ecommercedaabacdaabacan dalabsida dhoofinta dhoofintu u shaqeysosida daabacaadda-dalabku u shaqeeyoKlaviyoku daabac baahidaadadaabacanSoo duub oo klaviyoSoo duub oo daabacsoo iibso daabacaad daabacaniftiinbuuxinta sumadda cad